नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका बिमारी निको हुदै ! - Mitho Khabar
April 10, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका बिमारी निको हुदै !
संक्रमित उपचाररत अस्पतालका चिकित्सकले कोराना संक्रमण भएकाहरू निको हुने क्रममा रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । चिकित्सकले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन भने सबैमा आग्रह गरेका छन् । प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा यो समाचार लेखेका छन् ।
१२ चैतमा तेस्रो संक्रमित भेटिएका थिए । उनी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट आएका धादिङका ३२ वर्षीय नेपाली पुरुष हुन् । ६ चैतमा नेपाल फर्किएका उनी १० चैतमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्न भएका थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य बन्दै गएको छ । उनी एयर अरबियाको फ्लाइट नम्बर जी ९५३७ बाट यूएईको सारजहाँ विमानस्थलबाट नेपाल आएका थिए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईबाट नेपाल फर्किएका धनगढीका ३४ वर्षीय पुरुष चौथो संक्रमित हुन् । १४ चैतमा संक्रमणको पुष्टि भएका उनको उपचार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ ।
बागलुङकी १९ वर्षीया युवती पाँचौं संक्रमित हुन् । १५ चैतमा संक्रमणको पुष्टि भएकी उनी कतार एयरको क्यूआर ६५२ को फ्लाइटबाट नेपाल आएकी थिइन् । उनको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
४ चैतमा कतार एयरबाट नेपाल आएकी बागलुङकी महिलामा संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या ६ पुगेको थियो । २० चैतमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो । हाल ती महिलाको धौलागिरी अस्पतालमा उपचार जारी रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।
गत २० चैतमा थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमितमध्ये एक जनामा स्थानीय संक्रमण देखिएको थियो । चौथो संक्रमितको नाताले भाउजू पर्ने ३४ वर्षीया महिलालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो । भारतको उत्तराखण्डबाट नेपाल आएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो । यस्तै, संक्रमण देखिएकामध्ये कैलालीका २१ वर्षीय पुरुष मुम्बईबाट नेपाल फर्किएका थिए । ती तीन जनाको उपचार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ ।